यस्ता श्रीमति जसले श्रीमानलाई कहिल्यै प्रगति गर्न दिनैनन् ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यस्ता श्रीमति जसले श्रीमानलाई कहिल्यै प्रगति गर्न दिनैनन् !
नेपाली समाजमा श्रीमानलाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन । श्रीमानहरु परिवारको लागि म र्न तयार हुन्छन । आफ्नो श्रीमानलाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन ! उक्तकुरा बिभिन्न अध्ययनबाट समेत प्रमाणित भएको छ। ‘लोग्ने स्वास्नीको झ गडा परालको आगो’ भन्ने त भनाई नै छ ।
श्रीमान र श्रीमतीबीच सामान्य ठाकठुक पर्नु दाम्पत्य सम्वन्धकै एउटा हिस्सा हो । तर, जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन !
तर कहिलेकाहीँ हुने स-साना झग’डापछि तपाईंलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ र यसले तपाईं आफ्नो प्रेमलाई अर्को तहमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ । पार्टनरको कुनै बानी तपाईंलाई नराम्रो लाग्छ भने आँखा चिम्लिदिन सजिलो हुन्छ । तर पनि यदि तपाईं त्यो बानी सुधारियोस भन्ने चाहनुहुन्छ र राम्रो नतिजा ल्याउनको लागि सामान्य झ गडा बेहोर्न तयार हुनुहुन्छ भने यो चाँहि तपाईंको साँचो मायाको संकेत हो ।